Jikọtara: 23 Jenụwarị 2018, 10:24
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by NieNix » 23 Jenụwarị 2018, 10:54
Ebudatara m ma wụnye Boeing 737 Classic Package nke P3d, ma mgbe m bidoro P3D v4 Enweghị m ike ịchọta Boeing 737. Achọrọ m Mmemme ọzọ iji malite Boeing ngwugwu?
Mgbe emechara TDS Boeing 737-700 American ụgbọ elu FSX & P3D Nchịkọta enwere otu nsogbu ahụ, enweghị m Boeing Plane.
Na-ekwu banyere Matthias
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by NieNix » 23 Jenụwarị 2018, 18:07
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by DRCW » Abụọ 13 Feb 2018, 01:07
Nnọọ, ị kwere ka Rikooo mee ihe na-akpaghị aka? Ndi installer ahụ chọputara akpaghị aka P3D V4? Na akwadebere faịlị echekwara na faili nchekwa gị Add-ons) can nwere ike idetuo nchekwa ụgbọ elu na mado ya na Mmemme Mmemme / Lockheed Martin / Ihe 3D kwadebere v4 / Sim ihe / ugbo elu